'ဘီလီယံနှင့်ချီသောအတွေးအခေါ်များ' သည်လျှပ်တစ်ပြက်ရိုက်ချက်တစ်ခုသာဖြစ်သည်။ morphing porn အရသာကိုဖော်ပြရန်နှစ်ရှည်လေ့လာမှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည် (၂၀၁၂) - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်၌ဆန်
longitudinal လေ့လာမှုများ porn အရသာ morphing ထုတ်ဖေါ်ဖို့လိုအပ်
ဇူလိုင်လ ၂၇၊ ၂၀၁၂ တွင် Gary Wilson က Cupid's Poisoned Arrow တွင်ထုတ်ဝေသည်
ဒီ post တစ်ခုတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပါတယ် Grey က၏ 50 Shades နှင့် Futanari Porn ပတ်သက်. အမှန်တရား Ogi Ogas, Ph.D ဘွဲ့ကိုအားဖြင့်
သင်၏ပို့စ်တွင်သင်နားလည်မှုလွဲခဲ့သည့်အချက်အချို့ကိုရှင်းလင်းခြင်းဖြင့်သင်၏အထက် post ကိုကျွန်ုပ်တို့စတင်ချင်ပါတယ်။
အကျိုးဆက်အနေနှင့်သင်ရေးသားခဲ့သည့်အရာအများစုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကအချက်နှင့်လုံးဝမပတ်သက်ပါ - porn စွဲ-ဆက်စပ်များ၏အကျိုးဆက်အဖြစ် morphed ပြီအရသာ ဦးနှောက် အပြောင်းအလဲများသည်ထိုကဲ့သို့သောအသုံးပြုသူများ၏အခြေခံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာအကြောင်းအနည်းငယ်သာဖော်ပြသည်။ သုတေသနတစ်ဦးချင်းစီအသုံးပြုသူကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအရသာခြေရာခံမထားရင် နှစ်ပေါင်းဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်ငါတို့သည်ငါတို့၏ပို့စ်တွင်လုပ်သောအမှတ်ချေပနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်မပိုင်ကိုပြု၏။
စွဲ-related ဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အရှိဆုံးလူ အဘယ်သူ၏ Self-အစီရင်ခံစာများ ကျနော်တို့ဟာသူတို့ရဲ့နှစ်ဆယ်ကျော်၌ရှိကြ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူတို့ 8-12 နှစ်ပေါင်း porn ကို အသုံးပြု. ပါပြီ။
အဆိုပါ3လသမိုင်းနဲ့ သင်ဆန်းစစ်လေ့လာခဲ့သည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ပို့စ်တွင်တင်ပြခဲ့သောဖြစ်စဉ်ကိုဖော်ထုတ်။ မရပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သုံးစွဲသူများတင်ပြသည့်ပြောင်းလဲနေသည့်အရသာအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ရန်သမိုင်းတိုတောင်းမည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်သင်၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအပေါ်မှီခိုနေသူများသည်စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများကြောင့်အသစ်သောအမျိုးအစားများသို့အရှိန်မြှင့်တင်ခြင်းကိုအရေးကြီးသောအလားအလာရှုပ်ထွေးမှုအဖြစ်မစဉ်းစားကြပါ။
ရုံကျနော်တို့အများဆုံးယောက်ျားတစ်ဦးအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောဗီဒီယိုအမျိုးအစားအများကြီးကိုကြည့်ကြောင်းအကြံပြုမရှင်းလင်း တစ်ခုတည်း session တစ်ခု (သင်ထောက်ပြသကဲ့သို့အချို့လုပ်ပေးပေမယ့်) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အမှတ်မှာများစွာသော porn အသုံးပြုသူများ၏အရသာသည်သူတို့၏အခြေခံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒများကိုကိုယ်စားမပြုတော့ခြင်းဖြစ်သည်။
porn အသုံးပြုသူများသည် session တစ်ခုအတွင်း၌ tab များစွာဖွင့်သောအခါ၊ ထို tab များသည်ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းတို့၏ fetish-du-jour နှင့်ဆက်နွှယ်ကြောင်းသံသယဖြစ်စရာမရှိပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင်တွင်သင်သည်အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှ porn အရသာများသည်တည်ငြိမ်သည်ဟုကောက်ချက်ချရန်တွန့်ဆုတ်နေသင့်သည်။
စကားမစပ်၊ porn ရှာဖွေမှုအားလုံးသည်အသစ်အဆန်းကိုရှာဖွေခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ဤအရာမရှိပါကအသုံးပြုသူများသည်သူတို့၏ဂရုတစိုက်မှတ်သားထားသော / သိမ်းဆည်းထားသောအကြိုက်ဆုံးများကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုမည်ဖြစ်သည်။ ယောက်ျားများစွာသည်အကြီးအကျယ်ညစ်ညမ်းသောကောက်ယူစုဆောင်းမှုကိုရေးသားဖော်ပြကြသည်။ အသစ်အဆန်း၏ဆွဲဆောင်မှုမှာအလွန်များပြားသောကြောင့်သူတို့ကိုဘယ်တော့မျှမကြည့်ခဲ့ကြပါ။ လေးလံသော web-cam အသုံးပြုမှုသည်အသစ်အဆန်းပြုပြင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ယောက်ျားများသည်လူများကိုမဟုတ်ဘဲဖန်သားပြင်များနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နေဆဲဖြစ်သည်။
ရသောအခါကိုသတိပြုပါ စှဲမွဲမှု ပိုမိုဆိုးရွားလာစေမည့်နည်းလမ်းနှစ်မျိုးရှိသည်။ အင်တာနက်ပေါ်မှအင်တာနက်အသုံးပြုသူကိုဖမ်းယူသည်။ ၁) လူတစ် ဦး ဦး နှစ်သက်သောအမျိုးအစားကိုကြည့်ခြင်းနှင့် ၂) ဝတ္ထုအမျိုးအစားများကိုကြည့်ခြင်း။ ရှာဖွေခြင်း (ရှာဖွေခြင်း), အသစ်အဆန်းနှင့်အားလုံးအံ့အားသင့်စရာ ဖြန့်ချိ dopamineအတော်လေးကင်းကနေ dopamine ခေါ်ဆောင်သွား themes များတုံ့ပြန်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။
2 ။ သငျသညျခေတ်မမီတော့သုတေသနလုပ်ငန်းအတွက်သိပ်ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုနေရာချ
အရသာသည်မပြောင်းလဲနိုင်သောသင်၏ကောက်ချက်ကိုထောက်ခံသည့်အပေါများသည့်သုတေသနကိုသင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက် porn အသုံးပြုသူများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤinရိယာရှိသုတေသနအားခြေရာခံနိုင်ပြီးလက်ရှိအတတ်ပညာ၏ညစ်ညမ်းသောပုံမဟုတ်သည့်နည်း (အင်တာနက်အသုံးပြုသူများအတွက်) စွဲလမ်းမှုကိုပြသနေခြင်းကြောင့်သက်ဆိုင်မှုအတွက်လုံလောက်သောလက်ရှိအရာများကိုမတွေ့ရပါ။ (သက်ဆိုင်ရာအင်တာနက်စွဲလေ့လာမှုများဖြစ်သည် ဒီနေရာမှာစုဆောင်း။ အချို့မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများပါ ၀ င်သည်။ ) ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာ၊ အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှအင်တာနက်အပြာအသုံးပြုသူများ၏လိင်အရသာကိုလေ့လာသောမည်သည့်သုတေသနမျိုးကိုမတွေ့ဖူးဘူးလား။
UPDATE - တင်းမာမှုအပေါ်သုတေသနစတင်ပေါ်ပေါက်လာသည်။ ကြည့်ပါ လေ့လာရေး Porn အသုံးပြုသူများအတွက်စက်လှေကား (နှင့်လေ့) ကိုရှာပါ။
သငျသညျအကြှနျုပျတို့ထောက်ခံကြောင်းမှန် -Norman Doidge MD ရဲ့ သည်းခံခြင်းသည်ယနေ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ playing မှပါ ၀ င်နေသည်ဟုရှုမြင်ပါ။ သူ၏ဖောက်သည်များ၏အတွေ့အကြုံသည်ဝက်ဘ်တစ်ဝှမ်းမှကိုယ်တိုင်တင်ပြချက်များနှင့်လုံးဝကိုက်ညီသည်။ ဝမ်းနည်းစရာမှာသုတေသီများသည်အယူအဆကိုအလွန်အမင်းယုံကြည်မှုအလွန်မြင့်မားပြီး“ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာများသည်မပြောင်းလဲနိုင်သောအရာများဖြစ်သည် (အနည်းဆုံးယောက်ျားများတွင်)” ဟူ၍ သူတို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် Doidge လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သောပြောင်းလဲမှုကိုမဖော်ထုတ်နိုင်သေးပါ။
သို့သော် အကယ်၍ သင်လိုအပ်သောသုတေသနပြုလုပ်လိုပါကသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ရည်ညွှန်းကိုးကားလိုပါသည် Web ကိုဖြတ်ပြီးဖိုရမ်များ နိုင်ငံအများအပြားအတွက်ဘယ်မှာယောက်ျားစိုးရိမ်ဖွယ်ရာ regularity နှင့်အတူဤ morphing-အရသာဖြစ်ရပ်ဆန်းအစီရင်ခံရသည်။ ဒါဟာသုတေသနသို့သော်များ၏မေးခွန်းလွှာများနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအခမဲ့တောင်းမည် ဘက်လိုက် စေတယ်။
တကယ်တော့, reddit / nofap တစ်ဦးကိုထုတ်လုပ် အဖွဲ့ဝင်စစ်တမ်း, အဖွဲ့ဝင်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်သည်ညစ်ညမ်းအမျိုးအစားများမှတစ်ဆင့်သိသိသာသာမြင့်တက်လာခဲ့သည်။
အကြှနျုပျ၏အရသာ ပို. ပို. လွန်ကဲသို့မဟုတ် deviant ဖြစ်လာခဲ့သည်နှင့်ဤငါ့ကိုခံစားရစေ အရှက်ကွဲခြင်း or စိတ်ဖိစီးမှု - 36%
အကြှနျုပျ၏အရသာ ပို. ပို. လွန်ကဲသို့မဟုတ် deviant ဖြစ်လာခဲ့သည်နှင့်ဤအမှုကိုပြု မဟုတ် ငါ့ကိုအရှက်ကွဲခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုခံစားရစေ - 27%
3 ။ ရိုက်ချက် supernormal ဆွပါဝင်ပတ်သက်သည်အဘယ်မှာရှိလေးနက်န့်အသတ်ရှိတယ်
အမျိုးသမီးများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ဆွေးနွေးမှုသည်အခြားရိုက်ချက်မျှသာဖြစ်သည်။ ထပ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူကဘယ်သူကိုအသစ်လဲ အတွင်း တစ်ဦး session တစ်ခု, ဒါမှမဟုတ်ပင်တိုတောင်းသောကာလအတွင်း၌။ ကျနော်တို့ဆက်စပ်ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကို၏အကျိုးဆက်အဖြစ်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဖြစ်ပေါ်ရသောသည်းခံစိတ်လို့ခေါ်တဲ့စွဲလုပ်ငန်းစဉ်အကြောင်းပြောနေတာနေကြသည်။
စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်နွယ်သောသည်းခံမှု၏ချောစောင်းသည် ဦး နှောက်အတွင်းရှိ dopamine အချက်ပြခြင်းနှင့်စိတ်ကြွဆေးများပိုမိုရှာဖွေခြင်းတို့နှင့်ဆက်စပ်သည်။ အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါ။ သူတို့တစ်တွေကွဲပြားခြားနားသောနှိုးဆွကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အချို့ကမူ၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းသည်၎င်းတို့အားစိတ်ပျက်အားလျော့စေသည်ဟုအစီရင်ခံပြီးဖြစ်သည်။
သင်၏လျှပ်တစ်ပြက်မော်ဒယ်လ်ကလူအများဖော်ပြသည့်အရာကိုမရှင်းပြပါ။ - တ ဦး တည်း၏လက်ရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုမသွားနိုင်ခြင်းနှင့်အထွတ်အထိပ်သို့မရောက်သေးသည့်အရာသို့ရွေ့လျားခြင်း၊ သင်၏စာအုပ်သည်ဖြစ်ပျက်နိုင်ကြောင်းငြင်းဆိုရုံမျှသာရှိသည် ကဖြစ်ပျက်နေသည်။ အဖြစ်ဝေးကြှနျုပျတို့သိအဖြစ်ကိုသာဦးနှောက် plasticity မော်ဒယ်ဒီယခုအကျွမ်းတဝင်ပုံစံကိုရှင်းပြသည်။
သငျသညျ desensitization များ၏ concept ကိုပယ်ချပေမယ့်သုတေသနပြုပြီးသားကအင်တာနက်ကိုစွဲထဲတွင်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ မြင် Striatal Dopamine D2 receptor ကိုအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုနှင့်အတူပြည်သူ့အတွက်လျှော့ချ နှင့် အင်တာနက်စွဲခြင်းရောဂါနှင့်အတူပြည်သူ့အတွက် Striatal Dopamine ပို့ဆောင်ရေးလျှော့ချ အင်တာနက်ကိုစွဲတှငျတှေ့ကတခြားစွဲ-related ဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုအဘို့ဤ post ကိုကြည့်ရှုပါ: မကြာသေးမှီကအင်တာနက်ကိုစွဲလမ်းမှုဦးနှောက်လေ့လာရေး Porn Include ။
4 ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏အတွေးအခေါ် mischaracterized ပါပြီ
သင်၏ပို့စ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏တင်ပို့မှုသည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကျင့်သုံးခြင်းသို့မဟုတ်ခေါ်ခြင်းအပေါ်အခြေခံသည်ဟုဆိုလိုခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အံ့အားသင့်ခဲ့ရသည်။ ဒါက Seltzer ရဲ့စကားပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အမှတ်မှာစွဲလမ်းမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့် morphing နေသော porn အရသာသည်တစ် ဦး ၏လက္ခဏာဖြစ်သည် pathology-vanilla, ချောကလက်သို့မဟုတ်စတော်ဘယ်ရီရှိမရှိ. ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, နျူကလီးယပ်မှတ်ပုံတင် neurochemical သက်ရောက်မှုမဟုတ်ဘဲအကြောင်းအရာ accumbens ။
သင်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုကို 'မကောင်းမှုကျူးလွန်သူများ' မှကာကွယ်ပေးသည်ကိုယုံရသည်မှာပျော်စရာကောင်းသည်။ သို့သော်စာဖတ်သူများအားသင်၏စကားများဖြင့်လှည့်ဖြားမခံရစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ပို့စ်၏ဤအပိုင်းကိုဒီမှာဖတ်ပါ။
“ ဘီလီယံနာသောအတွေးအခေါ်များသည်ပြီးမြောက်အောင်မြင်သောအရာများထဲမှတစ်ခုမှာလိင်စိတ်ကြိုက်နှစ်သက်မှုများစွာကိုပုံမှန်ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည်သင့်ကို (နှင့်လူအများစုအတွက်) စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသည်ဟုထင်မှတ်စေခြင်းဖြစ်သည်။ သိသာထင်ရှားသည့်ကြိုတင်ရွေးချယ်မှုပိုမိုကျယ်ပြန့်လေလေ၎င်းကို“ ဖျားနာခြင်း” ဟုရိုးရိုးရှင်းရှင်းပယ်ဖျက်ရန် ပို၍ ခက်ခဲလေအထူးသဖြင့်၎င်းအားယုံကြည်စိတ်ချစွာရှင်းပြနိုင်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာအကြောင်းတရားများရှိပါက။
ဤ“ deviant” အရသာအချို့သည်စွဲခြင်းနှင့်သည်းခံခြင်း (ပိုမိုအားစိုက်ထုတ်ရန်လိုအပ်ခြင်း) ကြောင့်သာဖြစ်လျှင်ကော။ အကယ်၍ လူအများအနေဖြင့်ရောဂါတိုးပွားမှု၏သက်သေအထောက်အထားများကိုတွေ့ကြုံခံစားရပါက၎င်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်လာနိုင်သည်၊ သို့သော်သူတို့၏အမူအကျင့်များသည်“ မကျန်းမမာ” ဟုမဆိုလိုပါ။ [စွဲ - ဆက်စပ်မှု]
လူ့သမိုင်း၌စွဲကပ်မှုကပ်ရောဂါများသည်ယခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့ဖူးပြီး၊ စွဲလမ်းသူများခံစားခဲ့ရသည့်ရောဂါလက္ခဏာများကို“ ရောဂါကင်းရှင်းရေး” ဟူသောအဓိပ္ပာယ်ဖြင့်မပြခဲ့ပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ post ကိုမတဦးတည်းစကားလုံးအထူးသဖြင့်အကြောင်းအရာမှုကိုစီရင်ခဲ့သည်။ သည်းခံစိတ်သာလက္ခဏာဤအပိုင်းကိုအတွင်းဆွေးနွေးမှုအောက်မှာဖြစ်ခဲ့သည်။
“ စွဲလမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာအတွေးအခေါ်များ” မည်သို့ဖြစ်နိုင်သည်ကိုသင်ရှင်းလင်းရှင်းပြနိုင်ပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပို့စ်များကိုစွဲလမ်းကျွမ်းကျင်သူများနှင့်မကြာခဏစစ်ဆေးလေ့ရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့သိသည့်အတိုင်းကိုယ်ကျင့်တရားစံနှုန်းကျင့်သုံးလိုသည့်ဆန္ဒကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့လည်းရော၊
ငါတို့ erotica အားလုံးကိုအတူတကွစုစည်းလိုက်ပြီးဒါက“ မလွဲမရှောင်သာအန္တရာယ်ရှိတဲ့ 'ထူးဆန်းတဲ့ညစ်ညမ်းမှုကိုတိုးပွားစေတယ် "လို့ပြောတာပါ။ ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပို့စ်မှာရေးထားတာတွေကိုမှားယွင်းစွာဖော်ပြတယ်။ 'ထူးထူးဆန်းဆန်းညစ်ညမ်းမှုသို့အရှိန်မြှင့်တင်ခြင်း' ဟူသောစကားစုသည်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံကိုရည်ညွှန်းသည် စွဲ, အားလုံးမဟုတ် porn အသုံးပြုသူများသည်။ စက်လှေကားတစ် function ကိုဖြစ်ပါတယ် ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲ တစ်စုံတစ်ဦးက vanilla သို့မဟုတ် fetish erotica overconsuming ဖြစ်ပါတယ်ရှိမရှိ။
အားလုံးကတော့ဦးနှောက်သင်တန်း၏, စွဲ-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကိုတွေ့ကြုံခံစား, ဤကျွန်တော်တို့ရဲ့ post ကိုထံမှထင်ရှားပါပြီသငျ့သညျ။ ကျနော်တို့စွဲသို့ချော်သူတို့အဘို့, ထူးထူးဆန်းဆန်း porn မှတင်းမာမှုအများဆုံးဖွယ်ရှိတဲ့ရောဂါဗေဒ၏လက္ခဏာထက်နောက်ခံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာတစ်ခုအရိပ်အယောင်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြံပြုချက်အနားမှာရပ်နေလုပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းမတိုင်မီတွင်အမျိုးသားများ၏လိင်အရသာများသည်အမျိုးသမီးများထက် ပိုမို၍ တည်ရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သဘောတူသည်။ မှန်ကန်သောသုတေသနကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသည်အနည်းဆုံးညစ်ညမ်းအရသာနှင့်သက်ဆိုင်သည့်နေရာတွင်ထိုယူဆချက်အားအားနည်းစေသည်ဟုဖော်ပြသည်။
သင်၏ 'လျှပ်တစ်ပြက်' သုတေသနသည်ကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပြသည့်ဖြစ်စဉ်ကိုမဖော်ထုတ်နိုင်ပါ။ သို့သော်၊ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင်သင်၏ဒေတာများကိုစုဆောင်းသည့်အခါ၎င်းသည်ကျယ်ပြန့်စွာပျံ့နှံ့နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ လွန်ခဲ့သောငါးနှစ်အတွင်းမှသာကျွန်ုပ်တို့ရေးသားသည့်ပြင်းထန်သောလက္ခဏာများ - လိင်စွမ်းဆောင်ရည်ပြproblemsနာများ၊ လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်ဒါကြောင့်ထွက် 3-D ကိုအလားအလာအိမ်ထောင်ဖက်မှဆွဲဆောင်မှုမရှိခြင်းနှင့်။
အဲဒီရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့ဆက်စပ်နေကြသည်ပုံ highspeed ၏ကြာချိန် လက်လှမ်းနှင့် ဘယ်လောက်စောစောပိုင်းအသက်တာ၌ တစ်စုံတစ်ဦးကအသုံးပြုစတင်သည်။ ကျနော်တို့ကစဉ်းစား ပညာရှိသောသူ သင်၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိုအားကိုးနေသော Seltzer ကဲ့သို့သောသူများအားယနေ့သင်၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူများနှင့်သူတို့၏စောင့်ရှောက်သူများအတွက်မလုံလောက်ကြောင်းသတိပေးရန်။
ကျွန်ုပ်တို့မှန်လျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ခြောက်လကြာခေတ်နောက်ကျနေပြီဖြစ်သောသည်းခံစိတ်သည်အလုပ်တွင်ရှိကောင်းရှိနိုင်သည့်အလားအလာကိုမဖြေရှင်းနိုင်။ ယခုအခါအမှန်တကယ်စိုးရိမ်ဖွယ်ကောင်းသောရောဂါလက္ခဏာများကိုစတင်လေ့လာခြင်းမပြုသည့်သုတေသနအချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးလိုက်နာသင့်သည်။ ကျယ်ပြန့်စွာအစီရင်ခံတင်ပြခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏အခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။
စတင်နေရာကောင်းတစ်ခုစေ့စေ့စပ်စပ်နှင့်အတူရှိ နားလည်မှု ၏သက်ရောက်မှုများ မကြာသေးမီစွဲမှ neuroscience ၏ဒီနေ့၏ပို။ ပို။ အစွမ်းထက်ပေးပို့၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအပေါ် ဆိုက်ဘာဆွ။ ဒီမှာပြissueနာက erotica နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး၊ အသစ်ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ပါ။ ဤတွင်အသုံးပြုသူ၏အင်တာနက်ပေါ်မှထူးခြားသောပြောင်းလဲမှုနှင့်ပတ်သက်သောသမိုင်းကြောင်းမှတ်တမ်းဖြစ်သည်။ ဒီကနေ့ပဲပေါ်လာတယ်
“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ” သည်တစ်ချိန်က Playboy ထက်အနည်းငယ်မျှသာရှိသည်၊ ကေဘယ်လ်ကြိုးဖြင့်ဆက်သွယ်နိုင်သော softcore ပစ္စည်းများဖြစ်သော်လည်းယောက်ျားအများစုအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမှုရရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာသင်၏ VCR ကိုမှန်ကန်သောအချိန်တွင်ခေတ္တရပ်နားရန်ဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသော sh * t !! ဤစာရိုက်စဉ်ကစဉ်းစားခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်အလွန်အရေးကြီးသောတရားရုံးချုပ်၏စီရင်ချက်အပြီးတွင်အဓမ္မပြုကျင့်မှုသို့မဟုတ်ကလေးများအားညစ်ညမ်းသောအရာသို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ရာမှလွဲလျှင်ပထမပြင်ဆင်ချက်မှလုံးဝကာကွယ်ပေးခဲ့သည်။ ယခုတွင်သင့်တွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမုန်းသောသူများရှိသည်။ သို့သော်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကို“ အမေရိကန် - အမေရိကန်” အဖြစ်ချိုးဖောက်ရန်မည်သည့်ကြိုးပမ်းမှုကိုမဆိုမြင်တွေ့ရသည်။ regressive / ဖိနှိပ် / တုံ့ပြန်မှု။ ငရဲ၊ အမျိုးသမီးရေးဝါဒီများပင်လျှင်ညစ်ညမ်းမှုသည်အမျိုးသမီးများ (နှင့်အပြာကြယ်ပွင့်များအတွက်) စွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်ဟုဆိုကြသည်။
၂၀၀၀ ပြည့်လွန်နှစ်များနှောင်းပိုင်းနှောင်းပိုင်းအထိ Johnny နှင့် Lisa သည်စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသော fetish နှင့် philia တိုင်းကိုမြင့်မားသောအင်တာနက်အမြန်နှုန်းဖြင့် nanosecond အတွင်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဟုမည်သူမျှမထင်ကြပါ။ (Oh man … PICTURE တစ်ခုတည်း download လုပ်ရန် ၅ မိနစ်ခန့်စောင့်ဆိုင်းရန်သတိရပါ။ ၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေအလယ်လောက်မှာသူရေးတဲ့စာကငါ့ဆီပြန်လာပြီ။ ) ငရဲ၊ ဒီနေ့အလယ်အလတ်ကျောင်းအများစုဟာစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းတည်ရှိပြီးဖြစ်သော f-ing အိတ်ထဲတွင်ထည့်နိုင်သည့်ကိရိယာတစ်ခုဖြင့်စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းတည်ရှိခဲ့သည့်ဖျားနာနေသောလိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုအားလုံးကိုရယူနိုင်သည်။
"ကောင်းသော" ရည်ရွယ်ချက်တွေအများကြီးမှားသွားပြီ။ လေဟာနယ်ထဲတွင်ရှိသောတည်ရှိမှုသည်လက်တွေ့လောက၌အမြဲတမ်းအဓိပ္ပာယ်မရှိသောကြောင့်နည်းပညာသည်အရာရာကိုပြောင်းလဲစေသည်။